विविध – नेपाल रफ्तार
झापा : क्यान्सर उपचारका लागि अब नेपालीले विदेशका अस्पताल धाउनु नपर्ने भएको छ । स्वदेशमा नै गुणस्तरीय क्यान्सर उपचार सेवा दिने ध्येयले झापाको विर्तामोडमा स्थापित ‘पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल’ पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएसँगै क्यान्सर उपचारका क्षेत्रमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको हो । यसका लागि आधुनिक भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति अस्पतालमा रहेको छ । बीएण्डसी अस्पताल परिसरमा रु ६०० करोडको लगानीमा क्यान्सर उपचार सेवाका लागि आवश्यक आधुनिक पूर्वाधार तयार भएको हो । निजी क्षेत्रब...
कम्प्युटर र ल्यापटपको स्पीड बढाउने पाँच तरिका
काठमाडौं । आजको डिजिटल युगमा हामी कम्प्युटरमा सबै काम गर्छौं, यस्तो अवस्थामा कम्प्युटरले कहिलेकाँही निकै ढिलो काम गर्दछ। कम्प्युटर स्लो हुँदा आधा समय कम्प्युटरलाई ह्याङ्ग हुने र त्यसलाई रिइन्स्टल गर्नमा खर्च गरिन्छ। कम्प्युटरमा त्यस्ता धेरै सफ्टवेयरहरू छन् जसले काम गर्न धेरै समय लिन्छ र यदि तपाईंको कम्प्युटरमा ती सफ्टवेयरले छन भने बढी समय लिन्छ । यस्तो अवस्थामा कम्प्युटरमा काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। १ कम्प्युटरमा खाली ठाउँ खाली गर्नुहोस् : जब तपाईंको कम्प्यूटरमा हार...
चन्द्रमाको सतहमा पानी : नासा
काठमाडौँ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले चन्द्रमाको सतहमा पानी भेटिएको जनाएको छ । नासा र जर्मन एरोस्पेस सेन्टरद्वारा सञ्चालित स्ट्राटोसफेरिक अब्जर्भभेटरी फर इन्फारेड एस्ट्रोनोमी (सोफिया)ले सूर्यको प्रकाश पर्ने चन्द्रमाको एक क्षेत्रमा पानी भेट्टाएको हो । 'सोफिया' उडिरहेको प्लेनमा जडित संसारकै सबैभन्दा ठूलो उड्ने अब्जर्भभेटरी टेलिस्कोप हो । सोफियाले चन्द्रमाको 'क्लेभियस क्रेटर' मा पानी फेला पारेको हो । क्लेभियस क्रेटर चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवस्थित छ । यसलाई पृथ्वीबाट प...
डाइटिङ नगरी शरीर घटाउन के गर्ने ? (जानी राखौ यी कुरा )
खानाको उचित संयोजन गरे डाइटिङ्ग नगरी पनि आफ्नो शरीर घटाउन सकिन्छ । भोको बसेर शरीर कमजोर मात्र हुन्छ भने मानसिक असर पनि पर्न सक्छ । खानालाई मिलाएर खाने र सामान्य शारीरिक अभ्यासले मात्र पनि शरीरलाई सामान्य अवस्थामा राख्न सकिने तथ्यहरुले पुष्टी गरिसकेका छन् । हामीले खाएका हरेक खानेकुरामा शरीरलाई काम लाग्ने कुरा नै हुन्छन् भन्ने हुन्न । अधिक क्यालोरीले पनि शरीरलाई असर गर्दछ । कृतिम रुपमा बनेका चकलेट, आइसक्रिम, बेकरी आइटम लगायतका खानेकुरामा कैलोरी अत्याधिक हुने भएकोले यस्ता खानेक...
काठमान्डौ। हेलीको पुच्छे«ताराका कारण हुने मृगशिरा उल्कावर्षाको गतिविधि आज राति अत्यधिक देखिने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ । यो पुच्छे«ताराका कारण वर्षमा दुई उल्कावर्षा हुन्छन् । हेलीको पुच्छे«ताराले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा छोडेका धुलोका कणका कारण प्रत्येक वर्ष मे महिनामा ‘एटा एक्वारीएट’ र अक्टोबरमा ‘ओरियनिड’ उल्कावर्षा हुने गर्छ । आजको उल्का वर्षाको स्रोत मृगशिरा (ओरायन) तारामण्डलमा भएको जस्तो देखिने हुनाले यसलाई मृगशिरा उल्कावर्षा (ओरियनिड मिटियर सावर) न...
लोकसेवा आयोगले निर्धारित सबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्यो
काठमाडौं। लोकसेवा आयोगले निर्धारित सबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। आयोगले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी यही कात्तिक १६ गतेदेखि गर्न लागिएको निजामती, सुरक्षा एवं संगठित संस्थाका सबै परीक्षाहरु स्थगित गरेको जनाएको छ। ‘हाल मिश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुमा सिर्जना भएको भय एवं आयोगका कर्मचारीहरुसमेत कोरोना भाइरसबाट सक्रंमित भई परीक्षासँग सम्बन्धित मुख्य शाखाहरू समेत बन्द गर्नुपरेको र कर्मचारीहर...
अविवाहित व्यक्तिमा मृत्युको जोखिम २ गुणा बढाउँछ : अध्ययन
एजेन्सी । विश्वभर महामारकिो रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का विषयमा विभिन्न देशमा विभिन्न शोध तथा अध्ययन भइरहेका छन् । यसैबीच भएको एउटा नयाँ अध्ययनले अविवाहित व्यक्तिमा तनाव थपिदिएको छ । कोरोना महामारीसँगै विवाहित जीवन स्वस्थ जीवनको लागि आवश्यक भएको छ । महामारीको संकटकालमा यो तर्क सत्य साबित हुन सुरु भएको छ । नयाँ अध्ययनका अनुसार कोविड १९का कारण अविवाहित व्यक्तिहरुमा मृत्यु हुने जोखिम विवाहितहरुको भन्दा बढी छ । स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयका शोधकर्ताले यसबारे चे...
आइतबार, आश्विन २५, २०७७
टाइफाइड कसरी हुन्छ र यस रोगबाट बच्न के गर्ने ?
टाइफाइड भनेको के हो ? टाइफाइड भनेको सालमोनेला टाइफी र प्याराटाइफी भन्ने जिवाणु वा ब्याकटेरियाको संक्रमणले हुने एक प्रकारको इन्फेकशन हो । यसलाई इनटेरिक फिभर पनि भनिन्छ किनभने यसको जिवाणुले मुख्य तया सुरुमा सानो आन्द्रामा इन्फेक्सन गर्छ । यस रोगबारे डाक्टर सुमन अधिकारीको सुझाव यस्तो रहेको छ । यो कसरी सर्छ ? फोहोर खाना दुषित पानी सरसफाइको कमी यसका लक्षणहरु लक्षणहरु सामान्य तया फोहोर पानी वा खाना खाएको एक देखि तीन हप्ताभित्र देखिन्छ । धेरैजस्तो विरामीमा ज्वोरो र पेट ...
शनिबार, आश्विन २४, २०७७
अमेरिकी डिभी चिठ्ठाका लागि कस्ता ब्यक्ति योग्य ?
काठमाडौं । हाइस्कुल स्तरको शिक्षा नभएपनि डिभी लोटरी भरेर अमेरिका जानका लागि योग्य हुनसक्ने जनाइएको छ । अमेरिकी सरकारले तोकेको काममा अनुभव भएमा शैक्षिक योग्यता नभएपनि डिभी लोटरीको लागि योग्य हुने प्रावधान रहेको छ । अमेरिकी सरकारले तोकेका जागिरहरुमा विगत पाँचबर्षभित्र दुईबर्षको अनुभव भएको व्यक्ति डिभी लोटरीका लागि योग्य हुने अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारले डिभी लोटरीका लागि पहिलो योग्यताका रुपमा हाइस्कुल स्तर (१२ कक्षासम्म) को शिक्षा ...
वाईफाईका लागि राउटर किन्दा के के कुरामा ध्यान दिने ?
प्रविधीको उच्चतम बिकास संगै अहिले सबैको घरघरमा वाईफाई राख्नु सामान्यजस्तै भएको छ। इन्टरनेटको गति र रेञ्जको निर्भरता राउटरमा अधिक रहन्छ। वाईफाईका लागि राउटर किन्दा यी कुरामा ख्याल गर्नु पर्छ : -एसीको स्तर अनुसार राउटर स्लो र स्पीड हुनेगर्छ। -राउटर कस्तो स्थानमा प्रयोग गर्ने कुराले पनि भूमिका खेल्छ। त्यसैले कस्तो राउटर खरिद गर्ने भन्ने कुरालाई असर गर्छ। ४ देखि ६ वटा उपकरणहरू मात्र एकैपटक जडान गर्ने हो भने र सानो क्षेत्रफलमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने N स्तरको र एउटा मात...